Izindaba - Izindwangu Ezimnandi Kunazo Zonke Ekuvikelweni Kwakho Kwelanga
Izindwangu ezinhle kakhulu zeBlackout Zokuvikela Kwakho Ilanga
Izindwangu zeRoller Blind Zibe yimfashini eyinhloko yokuvikela elangeni embonini yamanje. Njengoba inenzuzo yokusebenza okulula, ubuciko, isikhathi eside sokuphila futhi kufaneleka kangcono izindawo ezihlukile.
Ngenxa yesidingo esengeziwe sokulondolozwa kwamandla nobumfihlo, izimpumputhe zeBlackout Roller zidingeka kakhulu ekuhlobiseni iwindi. Kungavimba i-UV, inciphise ukushisa kuvuleke noma kukhanye ukukhanya kwelanga, ngakho-ke kungaholela ekusebenzeni kahle kokugcina amandla, lokhu kufaka isandla ekulawulweni kokufakwa amandla.
AmaBlackout Blinds asetshenziswa kakhulu eCafe, ihhovisi, ikhaya, ifulethi, ikhabethe nendawo yezentengiso. Kulula kakhulu ukufaka nokufaka okunye.
Imiklamo enkulu ye-ETEX yezindwangu eziyimpumputhe ze-blackout roller yiziphi ezisezingeni eliphakeme nokubuka okukhulu komhlaba okulungele imakethe edingekayo.
Ububanzi: 200-320cm ububanzi, ukukhetha okukhulu kobubanzi kuyahlangabezana nezidingo ezihlukile zezimakethe ezihlukile. Izinto zokwenziwa zenziwe nge-100% polyester, sisebenzisa intambo esezingeni eliphakeme kanye nekhemikhali yokucwilisa ukufaka amathuluzi, lokhu kuqinisekisa isikhathi eside sokuphila futhi siphephile ukuze sibe nempilo.
Ukuqinisekisa ikhwalithi enhle yezindwangu zethu, i-ETEX yenza izindwangu zethu ezimnyama kuhlolwe i-SGS kwi-Hard Metal, AZO Free, PVC Free.
Ukuqina Okukhanyayo: I-Blue Wool ebangeni lesi-5
Futhi singakhiqiza izindwangu zethu ezimnyama zibe yi-Waterproof, Fire Proof, anti-bacteria, anti-fugus, anti-uthuli, anti-umsindo, i-pearl, izitayela zesiliva ngokwesidingo sekhasimende ngalinye.
I-FG yethu ejwayelekile iyatholakala kwi-BS 5869-1980, NFPA701
Wonke ama-blackout ethu nawo angaba yi-DIY ekwakheni imibala emisha ngokwesidingo sekhasimende, noma yimuphi umbala wakho ungabonakala ekukhiqizeni kwethu.
Izindwangu ze-ETEX Blackout Roller Blind Blind zinezimpawu eziphezulu kakhulu zokufaka i-cupping kanye ne-flatness, lokhu inzuzo yethu ephakathi, Sisebenzisa amakhemikhali angenisiwe, anika ukusebenza okuhle kakhulu kokulengiswa ezindongeni ze-blackout roller.
Izindleko zethu ziyancintisana ngoba senza konke okusemandleni ukulawula izindleko kwinqubo ngayinye futhi sinikeza amakhasimende izindleko ezifanele zezindwangu ezingabizi kakhulu.
Izinga lokuvimba i-UV: 100%, Izinga leBlackout: 100%
Ukukhanyiswa Kokukhanya: 45%, Ukuhanjiswa Komoya: 10%
Izinto Zokupheka: Ac Acid Acid
Isikhathi sokuthumela: Jul-17-2020